Vhidhiyo 1 - Kurara kwepabonde (Chikamu 1). | KUSVIRA
Vhidhiyo 1 - Kurara kwepabonde (Chikamu 1).
Tsanangudzo Yezve Kusangana pabonde (Chikamu 1)
NaProf John Whitehall.
Tikugashirei kune yekutanga yehurukuro dzinoverengeka pane huru nyaya yezuva. Nyaya yeChidiki Gender Dysphoria. Ndiri mwana wepwere uye ndanga ndiri mumwe anopfuura makore makumi mashanu muchokwadi. Ndakafarira izvi makore akati wandei apfuura pamusangano pandakanga ndichifamba ndichidzika nemusuwo ndikanzwa kuti paive nehurukuro iyi paUwana hweGender Dysphoria. Uye kutaura chokwadi, ndakanga ndisingazive kuti zvaive nezvei kusvika pandakapinda imomo. Uye ipapo ndakafunga, handigoni kutenda izvi uye ndakatanga kuverenga uye kushanyira vanhu uye email vanhu uye kunetseka kwangu kwakawedzera exponentially. Saka, zvandichazotaura nezvazvo, kutaura zvazviri, harisi basa rangu pachiri, nekuti ndichataura kumberi kuti ini handina kuita ongororo pamusoro pachangu. Asi ini ndichave ndichireva kune kwevamwe kuferefetwa kwevanhu, uko kuri kuwanda. Uye kana paine munhu anoda kuziva zvakawanda, ini ndanyora zvinyorwa zvina mumagazini eQuadrant, iyo ichapa ruzivo rwakawanda kupfuura hurukuro iyi uye zvakare kupa mareferensi. Saka, izvi zvirevo zvebasa revamwe vanhu.
Saka, ndiri ani? Ndiri chiremba wepwere. Ini ndinoshanda sapurofesa wehutano hwevana uye vana vechidiki paYunivhesiti yeWestern Sydney. Asi ini ndinofanira kusvetuka mukati ndobva ndataura izvozvi panguva ino, ini handifembedzi, kana neimwe nzira, kuti ndimiririre iyo institution yakanaka. Ndiri pano kutaura ndoga. Ndakadzidziswa muediatrics muSydney, uyezve kuAfrica uye nekuEngland uye ndakashanda muzvipatara zvinoverengeka munyika dzichiri kusimukira. Ini ndakadzoka kuno uye ndanga ndiri mune vakawandaedi vana uye ndainyanya kuriritirwa nevacheche vairwara chaizvo. Ini ndaive director wezvekuchengetwa kwakanyanya kwevacheche vachangozvarwa muNorth Queensland ndisati ndadzoka pane ino post.
Saka, vanhu zvakare vanoti, "Zvakanaka, iwe hauna kuita ongororo mazviri, vangani vana vawakaitira izvi?" Ndiri kufara kutaura, neimwe pfungwa ndakafara, "Handina kubata munhu." Zvino munhu wese anoti, "Zvakanaka, hapana chaunoziva nezvazvo." Mhinduro yangu kune iyi ndeyekuti, "Zvakanaka, haina kumbobvira yavapo uye kuti ichi chiitiko chazvino chepfungwa" Zvino, vanopikisa vangu vanoti, "Zvakanaka, izvo hazvisi Chokwadi Zvaigara zviripo uye haungazvizive. ”Mhinduro yangu kune iyi ndeyekuti," Zvakanaka, ndanga ndichigara mune zvemitambo kwemakore ese iwayo. Vazhinji, vabereki vazhinji vaiuya uye nekutaura pachena kuti vataure zvavari kunetseka nezvepabonde zvine chekuita nevana vavo. Marudzi ese ezvinhu. Asi hapana akamboti, "Mwanakomana wangu anofunga kuti musikana." Izvo hazvina kudaro. Kunyangwe mumabhuku ezvinyorwa, kudzokera kumakore achangobva kupfuura, izvi hazvina kutaurwa.
Ndakavhota makumi maviri nesere evandaishanda navo vevana vane ruzivo rwekuita makore mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nerimwe, ndikavabvunza, "Munofungei nezveizvi?" Uye vangani vana vawakaona? ”Ivo vaigona kuyeuka uwandu hwegumi nemaviri mumazana mapfumbamwe nemakumi matatu nerimwe. Gumi revana ivavo vaiyeuka kunyanya nekuda kwehukama hwepfungwa hwakabatana. Uye vaviri vacho vanga vari ivo vakashungurudzwa zvebonde.
Zvaimbove zvirizvo, kuti kana mubereki akaunza mwana pamwe, kana kana mwana wacho ari kuti zvaive zvevakomana, wakanetseka kuti chii chaiitika; aive achiuya kumwana iyeye izvo zvaiita kuti vakomana kana vasikana vafarire. Saka, zvandiri kutaura ndezve gumi nemaviri mumakore mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nerimwe, amungadzorere kureba, izvo zvinoda kuita zana rimwe nerimwe zana. Nekudaro, kusvika parizvino, Nyamavhuvhu, zviuru zviviri negumi nemasere, ini ndinoudzwa kuti vana vanopfuura mazana matatu vakaunzwa kuchipatara chevana kuMelbourne nekuda kweGender Dysphoria. Mazana matatu atova gore rino. Nekudaro, kana ukabvisa izvozvo zvakapoteredzwa neAustralia, zvingangove chiuru chevana vakaendeswa kumakiriniki ePaediatrics Gender Dysphoria Zvimwe chetewo munyika dzekuMadokero. MuUnited States, manhamba acho akafanana neanobvisa exponential. Western Europe, kumwe exponential kubviswa.
Iri rave chairo dambudziko. Saka, munhu wese ari kupokana. Zvakanaka chii chiri chiitiko chaicho cheMwana Gender Dysphoria? Zvakanaka, chinamira pane yechipiri, chii chinonzi Childhood Gender Dysphoria? Ndicho chinhu chinovhiringidza. Uye ini ndichatora pano pane zvaunogona kupokana iBhaibheri rechirwere chepfungwa. Iyo tsanangudzo yakaitwa, asi inotaura kuti Gender Dysphoria yakanyanya kushushikana kana kukanganiswa muchikoro chezvemagariro kana dzimwe nzvimbo dzinokosha dzekushanda nekuda kwekukanganisa kusati kwaitika pakati peiye ane ruzivo, kurova, kuratidza murume kana mukadzi uye kupihwa murume kana mukadzi.
Zvakanaka izvo pasi zvinorevei? Izvi zvinoreva kuti mukomana semuenzaniso, chaizvo, kunyangwe nenyaya yekuti akajairika pabonde, anofunga kuti musikana. Kana kutungamirwa kufunga kuti iye musikana kana imwe nzira yakatenderedza. Saka, pane kusakwana pakati pemakomichi uye kutaura kwema chromosomes, ichi chiri chekunze genitalia uye zvinotaurwa nemwana kana iye achifunga kuti ndizvo. Zvino izvi zvinozobva zvatemwa nekuti vanhu avo vanotenda kuzvirevo zvevakadzi; kuti hapana chinhu chakadai semusikana nemukomana uye isu tese tiri kumwe kunhu, varikuti, "Zvakanaka, regedza, izvo zvakajairika." Zvakajairika kuti mukomana akangoerekana afunga kuti musikana. ”Saka, dysphoria iripi? Dysphoria inouya kana mwana akadaro neimwe nzira kana kuti dzimwe hasha. Isu tinoti kusashanda nemazvo nekuda kwekuvhiringidzika uku. Nyatsorembera. Ndiani arikupa nyonganiso? Zvinonzi nzanga iri kupa nyonganiso nekuti nzanga haigamuchire.
Naizvozvo neshoko, zvinotaurwa nevatsigiri vepfungwa idzi, "Ichi chinhu chakajairika kusava mukomana kana musikana." Tese tiri pane imwe nzvimbo pakati. Uye kana usiri kufara munzvimbo iyoyo imhosva yenharaunda nekuti haisi kukubvuma. "
Ikozvino iri bhizinesi rine njodzi uye tiri kuenda muhurukuro dzinotevera kuti titarise kuti kurapwa kweichii Kurapa kwandiri kuzopfupisa ndekwekukuru, kwakakura, kusingafungidziriki kupinza mupfungwa uye zvechokwadi muviri wemwana. Izvo zvinobudirira zvinoreva kuti inoda kutamiswa. Iko kune hukuru hwakakosha, njodzi, kune ino diagnosis sezvatichataura nezvazvo.
Saka, ini ndinofunga kuti izvi hazvina kumboitika pakutanga. Ini ndinofunga kuti izvi ndezvepfungwa fad. Ini ndinofunga kuti inokurudzirwa nenhau isingaori uye inopihwa mawebhusaiti uye zvakare ichipihwa ratidziro yakanzi chirongwa Chakachengetedzeka chikoro uye chiri kubuda mutsva muResilience, Kodzero uye Ruremekedzo hukama hwehukama, ichibuda chero anonyora. tsika muzvikoro. Nekudaro, ini ndinofunga ichi chipingaidzo chemagariro, chinhu chine njodzi, nekuda kwezvakanangana nemwana.
Vhidhiyo 1 - Yevacheche Gender Dysphoria - Tsanangudzo Yekusangana Kwepabonde. (Chikamu 1) Dzvanya> Kuti Dhawunirodha iyo PDF pano.
Dzvanya> Kuti uwane mushanduri wepamhepo wePDF kumutauro wako.
Sachigaro Chigaro Paediatrics Uye Hutano hwevana, Chikoro Chemishonga. Western Sydney University.
Vangapinda: MBBS, BA, DCH (MRCP (UK), FRACP, MPH uye TM.
BA Murdoch University, Perth Western Australia.
MBBS Yunivhesiti yeSydney, Australia
Zvinyorwa Zvakabudiswa: -
Kuedza paGender Dysphoric Vana - Quadrant Online.
Kuongorora Gender Dysphoric Kids
Gender Dysphoria uye Kuvhiyiwa Abuse - Quadrant Online.
Zvechidiki Gender Dysphoria uye Mutemo - Quadrant Online.
Mwana weGender Dysphoria uye Mutemo
Dare remhuri rinotadza 'Trans' Vana - Quadrant Online.
Dare Remhuri Rinodzivirira Gender Dysphoric Children
Nhungamiro dzekuparadzwa kwemitambo yevakadzi - Quadrant Online.
CAUSE (Kubatanidzwa Pamusoro Pokusachengeteka DzeBonde.) Australia.
CAUSE inowedzera kuonga kwayo kukuru kunaProfesa Whitehall nekupa kwake nguva uye hunyanzvi mumavhidhiyo aya.
CAUSE yakaumbwa nekuda kwevabereki vachiwedzera kuvhunduka nezve zvemukati menyaya yekuita zvepabonde uye pfungwa dzevakadzi dzavakawana kuti vana vavo vari kudzidziswa kuchikoro.
Aya mavhidhiyo anogadzirisa pfungwa dzinodzidziswa muZvikoro Zvakachengeteka, Kusimba, Kodzero uye Kuremekedza Ukama, uye zvimwe zvirongwa zveBonde Ed, zvinodzidziswa muVictorian State Zvikoro zvedu.
Isu paCISUSE tinotsigira kuti vanhu vese vakaenzana pakukosha.
Isu tinosimbisa kuti, mukati memutemo weAustralia, vanhu vese vane kodzero yekurarama hupenyu hwavo sezvavanoda.
Kupfuurirazve, isu tinotenda kuti vana vanofanirwa kurerwa mukati metsika dzakadzidziswa nevabereki vavo.
Vhidhiyo iyi uye imwe gumi neimwe paUwana hweGender Dysphoria uye ruzivo ruzhinji rwakawanda runogona kuwanikwa pane yedu webhusaiti.
CAUSE Webhusaiti URL: https://www.stopsafeschools.com/
Copyright CAUSE (Kubatanidzwa Pamusoro Asina Kudzivirirwa DzeBonde) 2018.